🥇 ▷ Android 6.0 Samsung S4: Ogow waxa ku saabsan oo dhan ✅
Android 6.0 Samsung S4: Ogow waxa ku saabsan oo dhan
Android 6.0 Marshmallow waa nooca ugu cusub ee Google (nidaamka hawlgalka mobilada). Waa cusboonaysiin ay filayaan dhammaan xitaa dadka isticmaala taleefannada Samsung. Maadaama shirkaddan Kuuriya ay tahay ta ugu qalabka badan adduunka oo dhan. Markaa Waa macquul inay isweydiiyaan haddii Android 6.0 Samsung S4 lagu raaxeysan karo.
Android Marshmallow 6.0: astaamaha
Noocan ayaa noo oggolaanaya inaan go’aan ka gaarno goorta aan rabno in xumbo ay muuqdaan. Waxaad fasax siin kartaa codsiyada kaliya waxa aad rabto inaad sameyso. Sidoo kale waad furi kartaa taleefankaaga adoo isticmaalaya farahaaga.
Ku raaxayso Google hadda cusub oo ku saabsan Touchez kordhin, kaas oo ku tusinaya xogta muhiimka ah ee shaashadda. Macluumaadka ayaa soo bixi doona kaliya adoo riixaya shaashadda dhowr ilbiriqsi. Xawaare aad u weyn ayaa kujira amarrada codka, oo aad ka sameyn doonto shaashadda qufulka. Waxa kale oo ku jira Doze oo u habeynaysa isticmaalka batteriga.
Waad dhihi kartaa taas Android 6.0 Waa qalabka loo yaqaan ‘Android Lollipop’ oo la hagaajiyay oo la kordhiyay astaamaha ugu weyn.
Suurtagalnimada Android 6.0 Samsung S4
Sida rasmiga ah ma jiro wax macluumaad ah oo sheegaya in Android 6.0 Samsung S4 ay suurtogal noqon doonto. Warar xasaasiya oo aad u wanaagsan ayaa la maqlay oo ku saabsan suuragalnimadaan. Laakiin fikradan mar hore waa la saaray maxaa yeelay dhowr sano ayaa ka soo wareegatay markii la bilaabay S4.
Sida aan wada ogsoonahay Samsung Galaxy S4 waxay si buuxda ula shaqaysaa Lollipop iyada oo aan wax dhibaato ah qabin. Iyo marka loo eego tijaabooyinkii ugu horreeyay ee lagu sameeyay Android 6.0 Samsung S4 ma muujin natiijooyin dhiirrigelin leh. Sidaa darteed, waxaa la hubin karaa in nidaamkan qalliinka uusan weligiis gaari doonin S4. Ilaa aynaan isku xidhin xididka.
Waa maxay sababta Android Marshmallow 6.0 aysan u gaari doonin Samsung S4?
Waan ka war qabnaa imaatinka nidaamkan dhammaan noocyada Galaxy S6. Xitaa Galaxy S5 ayaa heleysa cusboonaysiintaan. Laakiin maxaa si gaar ah ugu dhacaya Galaxy S4?
Qaar ka mid ah sababaha uu cusboonaysiintaan u heli doonin S4s waxaa sabab u ah processor-ka iyo RAM ay adeegsadaan aaladdan. Maadaama aysan ugu filneyn ku shaqeynta nidaamka saxda ah. Sidaas darteed ayay iyagu iska fogeeyeen fikradda ah inay ku biiraan Android 6.0 qaab moobiil sidan oo kale ah.
Sikastaba, Galaxy S4 ayaa ah midka ugu guulaha badan taariikhda Samsung. Laakiin iyada oo ay taasi jirto ma jiri doono Android Marshmallow 6.0.